I-Athene, Greece - World Tourism Portal
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha e-Athene, Greece
Bukela ividiyo ekhuluma nge-Athene, Greece
Hlola i-Athene inhloko-dolobha ye Greece nenhloko-dolobha yaseYurophu. Awekho amagama anele okuchaza inani lomlando kanye neqhaza lawo kwisayensi nezobuciko. Zitholele i-Athene ukuze uzizwe ujabule.
Futhi kwakuyinhliziyo yeGrisi yasendulo, impucuko enamandla nombuso.
Leli dolobha lathatha igama laso ku-Divine Athena, unkulunkulukazi wokuhlakanipha, impi, kanye nomvikeli waleli dolobha
Akukho engingakubhala okungakaze kubhalwe ngaphambili. I-Athene yindawo enokuthile kuwo wonke umuntu. Ungavakashela izikhumbuzo, izinkundla zemidlalo yaseshashalazini, impilo yasebusuku, izingadi ze-botanical, izitolo eziningi kanye nemakethe yezimbaza eMonastiraki.
Umlando waso ubuyela emuva kusikhathi se-Neolithic.
Idolobhakazi liphethwe yizimpawu zomhlaba ze-5th-century BC, kufaka phakathi i-Acropolis kanye nethempeli laseParthenon. IMyuziyam yase-Acropolis, kanye neNational Archaeological Museum, kutholile okuningi kusukela kuleso sikhathi njengezithombe ezibaziweyo, izindwani, ubucwebe.
Kulabo abathanda ukuhamba nokuthola ukuthi kunemigwaqo ethile, ehamba ngezinyawo kuphela, efana nemigwaqo evunguza yendawo yasePlaka, enendawo yokudlela, amathishi endabuko kanye nezindlu ezinobuhlakani. Lapho ungakhohlwa ukudla uGyros noSouvlaki bese uzama isaladi yamaGreek notamatisi, ukhukhamba, uwoyela omnqumo noshizi we-feta obizwa nge- “choriatiki”.
Lapho use-Athene ngeke wazi ukuthi uzohambela ini kuqala. Kuneminyaka engu-6000 yomlando kuzinyathelo zakho zonke. Phakathi kokumbalwa okufanele sisho yi-Acropolis enazo zonke izakhiwo zayo neminyuziyamu yayo, i-odeion of Herode, i-arch yaseHadrian, iPlaka, ECape Sounio ngethempeli lePoseidon (5th c. BC), iLycabettus Hill ngombono wedolobha lonke indlela eya olwandle, iThempeli le-Olympian Zeus, igquma lePhilopappou, nenkantolo yomthetho yakudala kunazo zonke emhlabeni i-Areios Pagos, i-Agora yasendulo.
Ungakhohlwa isikwele seSyntagma lapho ungabona khona isakhiwo sePhalamende lesiGrikhi nangaphambi kwaso iSikhumbuzo seSilo Esingaziwa, esigadwe yi-Evzones ngezingubo zendabuko, usiqaphe, isigodlo sasebukhosini sakudala futhi eduze kwaso iZingadi ZikaZwelonke ezineZappeion izakhiwo. Kukhona nomgwaqo odumile u-Ermou Street ongawathola kusuka kwimfashini kuya kwesiliva nobuciko eyenziwe ngezandla nobucwebecwebe. Ekupheleni kwalo mgwaqo kuneMonastiraki nemakethe yezikebhe zayo. Ngemuva kwalokho iKerameikos yamathuna edolobha lakudala.
Kufanele ubone inkundla yePanathenaikon ebizwa nangokuthi yiKallimarmaro lapho imidlalo yokuqala yama-Olimpiki ibibanjelwe khona emlandweni wanamuhla (1896).
Lezi yizindawo ezimbalwa kakhulu ongazihambela kodwa ngamunye uzonikeza umbono wokuthi ubuyile ngesikhathi
Kuya esikhathini sanamuhla
Vakashela iKolonaki, ebhekwa njengendawo “engokweningi” endaweni enkabeni ye-Athene. Lapho uzothola izitolo eziningi ezithengisa imikhiqizo ebizayo kanye ne-couture ephezulu, izindawo zokudlela zesimanje, imigoqo kanye namakhekhe.
I-Kifissia iyakufanelekela nokuvakashelwa, ngezindawo zayo ezinhle nezindawo ezihle kakhulu.
I-Athene inezindawo zokuhlala amahhotela ezisezingeni eliphakeme, izindlela zesimanje zokuhamba kanye nenketho enkulu yamathuba okuthenga, okudlela kanye nokudla kwasebusuku. Thola indawo yokudlela yase-Athene, amathofi, imigoqo, nezitolo ezithengisa imikhiqizo yesiGreek nezikhumbuzo. Uma ufuna impilo yasebusuku, vakashela i-Psyrri skwele ngemigoqo yayo eminingi.
I-Athene idolobha elihlaba umxhwele zonke izivakashi, ngazo zonke izinkathi zonyaka.
I-Acropolis njengesiza sasendulo yindawo yamagugu omhlaba futhi ivikelwe.
I-Acropolis yase-Athene idolobha / inqaba yakudala etholakala edwaleni lentaba i-150m ngaphezulu kwezinga lolwandle edolobheni lase-Athene. Iqoqo lezakhiwo eziningi zasendulo. Inokubaluleka kwezakhiwo nezomlando. Isakhiwo esidume kakhulu yiParthenon.
Kunobufakazi bokuthi igquma lalihlalwa kusukela ngonyaka we-3000 BC.
Ngekhulu lesihlanu uPericles wayeqondisa ukwakhiwa kwezinsalela ezibaluleke kakhulu zesiza.
Ngeshwa ngenxa yezimpi eziningi iGrisi eyabandakanyeka kuzo, izakhiwo zacekeleka phansi kabi.
In 1975 Greece yaqala ukubuyiselwa kwayo ukubuyisa izakhiwo enkazimulweni zayo zangaphambili.
Njalo ngeminyaka emine, kunomkhosi obizwa ngePanathenea.
Ngesikhathi somkhosi, idolobha lihamba phakathi kwedolobha ukuze liphele e-Acropolis.
Lapho, kubekwa ingubo entsha yoboya obotshwe kunoma yisiphi isithombe sika-Athena Polias e-Erechtheum noma esifanekisweni sika-Athena Parthenos.
UKerameikos - gakazi. Iklabhu. Izitolo zokudla zivula 24/7
Kuzungeze yonke indawo e-Athene yanamuhla kunendaba ethile ngemuva kwayo, ngakho-ke hlola i-Athene ngohambo lwakho olulandelayo.